Micro & Mini အကောင့်များဖြင့် အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများ ဇူလိုင် 2022 |2Trade ကိုလေ့လာပါ။
ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိလူတိုင်းသည် Forex trading ဆိုသည်မှာ ဘာလဲဆိုတာကို သိသည်။ သို့သော် ကမ်းလှမ်းမှုတွင် အကောင့်အမျိုးအစားများစွာဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင် စတင်ရမည်ကို သိရှိခြင်းမှာ ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် micro နှင့် mini အကောင့်များဖြင့် အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများကို ဆွေးနွေးပါမည်။
အကယ်၍ သင်သည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုလောကတွင်စတင်နေပြီဆိုလျှင်အသေးစားသို့မဟုတ် micro Forex အကောင့်ကိုစဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။ နာမတော်ကိုအမှီပြု။ အတိုင်း, ဒီသင်သည်အများကြီးသေးငယ်တဲ့ပမာဏနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် Forex ဈေးကွက်တွင်စတင်ရန်သင်ငွေအမြောက်အမြားမလိုအပ်တော့ပါ။ တကယ်တော့ကုန်သည်များသည်များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀ သာရောင်းဝယ်နိုင်ကြသည်။
Forex မိုက်ခရိုအကောင့်များသည်ယူနစ် ၁၀၀၀ ရှိသောအသေးစားယူနစ်များတွင်ကိုင်တွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အထူးသဖြင့်ကုန်သည်အသစ်များနှင့်စတင်ရန်အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ Forex အသေးစားအကောင့်များသည်ပမာဏအနည်းငယ်သာရောင်းဝယ်ပြီးများသောအားဖြင့်ယူနစ် ၁၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ micro or mini forex trading သည် သင်စိတ်ဝင်စားသည့် အရာတစ်ခုလို ဖြစ်နေပါက၊ သင်သည် မှန်ကန်သော နေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် mini နှင့် micro forex အကောင့်များ၊ ၎င်းတို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ၎င်းတို့ကို ပေးဆောင်သော ပွဲစားကောင်းကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကို သင်သိလိုသည့်အရာအားလုံးကို ဖြတ်သန်းသွားပါမည်။
Forex Mini / Micro အကောင့်ဆိုတာဘာလဲ။
အခြေခံအားဖြင့်၊ forex mini အကောင့်သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များကို သေးငယ်သော ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့် lot size positions များဖြင့် စျေးကွက်တွင် ရောင်းဝယ်နိုင်စေသော forex အကောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစား သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုအကောင့်တစ်ခုဖြင့် ကုန်သွယ်မှုသည် အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေဆုံးရှုံးမှုများကို ကန့်သတ်ထားသည်။ သင်မှန်းဆထားသည့်အတိုင်း၊ မိုက်ခရိုအကောင့်သည် မီနီထက် အရွယ်အစားပိုသေးငယ်သည်။ အဲဒါကို တစ်မိနစ်အတွင်း ထပ်ပြောပါ။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်၊ Forex အကောင့်များကိုစာချုပ်အရွယ်အစားသုံးမျိုးဖြင့်တင်ပြသည်။
မိုက်ခရိုအကောင့်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအခြေခံပစ္စည်းယူနစ် ၁၀၀၀ ၏စာချုပ်အရွယ်သို့ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။
အကောင့်အသေးစားတစ်ခုတွင်အခြေခံယူနစ် ၁၀,၀၀၀ နှင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
စံစာချုပ်များသည် အခြေခံငွေကြေးယူနစ် 100,000 တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
အလားတူစွာအလားတူအလားအလာရှိသောအလားအလာရှိသည့် pip (point per percent) ဆုကြေးသည် (သို့) လှုပ်ရှားမှုစျေးနှုန်းသည်မိုက်ခရို ၁၀ ဆင့်နှင့်တစ်ကွက်အတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာ၊ အစား $ 10 ၏။
ယခုအချို့ဆိုဒ်များသည်သေးငယ်သော 'nano' အကောင့်ကိုပေးပြီးလူအများအပြားကိုအခြေခံယူနစ် ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၀.၁၁) သာရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
Forex Mini နဲ့ Micro Accounts ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အသေးစားနှင့်အသေးစားအကောင့်ရွေးချယ်မှုများသည်စာချုပ်၏သေးငယ်သောပမာဏကြောင့်အသစ် (သို့) အတွေ့အကြုံမရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအဓိကဆွဲဆောင်သည်ဟုဆိုရမည်။ ဒီဟာကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုနည်းနည်းလေးနဲ့လုံးဝမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။ ဤသည်မှာ Forex ကုန်သွယ်ရေးကိုလေ့လာနေဆဲကုန်သည်များအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်မိုက်ခရိုနှင့်အသေးစားအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများသည်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများ (ဇယားများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ဝယ်ယူသူပံ့ပိုးမှု၊
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ပုံမှန် Forex အကောင့်များကို ယူနစ် 100,000 အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မိုက်ခရိုအကောင့်ကုန်သည်များသည် အမှာစာများကို ယူနစ် 1,000 အမြောက်အမြားဖြင့် အမှာစာများ ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အကောင့်အသေးစားများသည် ယူနစ် 10,000 ၏ အမှာစာများကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
ပိုသေးသောအရွယ်အစားသည်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကိုငွေကြေးစုံရွေးချယ်မှုများ၌ incognito ရန်ပုံငွေများကိုတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောအမိန့်များကိုပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ ထို့အပြင်လူသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အလောင်းအစားသေးငယ်မှုကြောင့်၎င်းတို့၏အန္တရာယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်သည်။
Forex Mini Accounts နှင့် Pips များ
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်သည်ကိုးကားချက်များဖြင့်ငွေကြေးများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည် ပျံ့နှံ့ တန်ဖိုး, ဥပမာ, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.200 ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုင်းသည်ငွေကြေးပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ အဆိုပါပြောင်းကုန်ပြီပိုက်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်လူသိများသည်။
အထက်ဖော်ပြပါဥပမာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကမူအခြေခံကျသောငွေကြေး (ယူရို) သည်ကိုးကားထားသောငွေကြေး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တက်သွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းသည်။ ဈေးနှုန်းသည်ဒdecimalမနေရာ (၄.၂၀၀၀) ကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဂျပန်ယန်းနှင့်ပတ်သက်သောအခါနှုန်းသည်ဒdecimalမ ၂ နေရာတွင်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၂၃.၆၂ ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် Forex စျေးကွက်သည်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာသည် pips, စတုတ္ထဒplaceမနေရာ။ ပိုက်သည်ငွေကြေးတန်ဖိုးအနည်းဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုပင်ကိုယ်စားပြုသည်။ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကိုအပိုင်းအစများဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေကြေးအတွဲ၏ကုန်သွယ်မှုတွင်ရရှိသော (သို့မဟုတ်) ဆုံးရှုံးမှုပမာဏသည်သိသိသာသာနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ နှင့် ၁၀၀,၀၀၀ ပမာဏသတ်မှတ်ချက်များ (အနည်းဆုံးငွေကြေးပမာဏ) ။
ရလဒ်အနေဖြင့် Forex ပွဲစားများသည်ငွေကြေးယူနစ်များကိုအရွယ်အစားအလိုက်တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ယင်းကိုတွက်ချက်သည်။ ၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသြဇာသက်ရောက်စေသည်။ သင်ရောင်းနေသောငွေကြေးအတွဲနှင့်အခြေခံငွေကြေးစျေးနှုန်းပေါ် မူတည်၍ ပိုက်လိုင်းနှုန်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
Forex အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်တစ်ခုသည် USD ကိုအသုံးပြုနေပါက - တစ် pip သည် micro account တစ်ခုအတွက် $0.10၊ mini account တစ်ခုအတွက် $1 နှင့် standard account တစ်ခုအတွက် $10 ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုးကားသောငွေကြေးသည် ဂျပန်ယန်းဖြစ်ပါက၊ pip သည် ထိုနှုန်းထားနှင့်အညီ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
Forex Mini နှင့် Micro Account ဥပမာများ
ကုန်သည်တစ် ဦး အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားမှာယူနစ် ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၀ ယ်လိုအားမပါဘဲ ၀ ယ်ရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ရန်ပုံငွေများစွာလိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းဥပမာတွင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို ၁.၂၀၇၅ သို့ယူရို ၁.၂၀၀၀ ဖြင့်ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ပိုက် 1.2000 ယူနစ် (1.2075 - 75 = .1.2000) ဖြစ်ပါတယ်။
Micro forex အကောင့်- 1,000 x .0075 = $7.50 အမြတ်များ။
အသေးစား Forex အကောင့်- 10,000 x .0075 = $75 အမြတ်များ။
ပုံမှန် Forex အကောင့်- 100,000 x .0085 = $750 အမြတ်များ။
နောက်ထပ်ယူရိုကုန်သွယ်မှု ၁.၁၉၉၉ သို့ကျဆင်းသွားသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၁၀ မှတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖော်ပြသည်။
Micro forex အကောင့် 1,000 x .0010 = $1 ဆုံးရှုံးမှု။
Mini forex အကောင့် 10,000 x .0010 = $10 ဆုံးရှုံးမှု။
ပုံမှန် Forex အကောင့် 100,000 x .0010 = $100 ဆုံးရှုံးမှု။
ထုံးစံအရပွဲစားများသည်ကုန်သည်များအား Forex အကောင့်များအားလုံးတွင်အဓိကအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပိုမိုကြီးမားသောစွန့်စားရမှုကုန်သွယ်မှုများတွင်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုနည်းပါးစေခြင်းများကိုပေးသည်။
လွှမ်းမိုးမှု၏အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍၊ Forex ပွဲစားသည် ပိုကြီးသောရာထူးတစ်ခုယူရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား လုံလောက်သောရန်ပုံငွေများကို credit ပေးလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကုန်သည်သည် ၎င်းတို့၏အကောင့်ရှိ ပမာဏဖြင့် ထိုရာထူးကို သာမန်အားဖြင့် မယူနိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ 100:1 ၏ leverage ကိုပေးသော forex ပွဲစားသည် သေးငယ်သောအကောင့်တစ်ခုရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးအား ငွေကြေးယူနစ် 100,000 ၏ ငွေသားအတိုးနှုန်းဖြင့် 1,000 အရွယ်အစား lot တစ်ခုတည်းကို အမိန့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Leverage သည် အမြတ်များကို ချဲ့ထွင်ရုံသာမက ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း သတိပြုပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဥပမာ (၇၅ pip gain) မှဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀: ၁ နှင့် ၁ အကြားဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဒီတော့ကုန်သည်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ၁၀ ပါးလမ်းလျှောက်မှုကလုပ်လိမ့်မယ် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကုန်ကျတယ် သင်မြင်သည့်အတိုင်းသင်၏ကန ဦး စရိတ်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောစွန့်စားမှုဖြစ်စေသည်။
Mini (သို့) Micro Forex ပွဲစားအကောင့်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
Forex ဈေးကွက်တွင်လူများပိုမိုရောင်း ၀ ယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်မြင်ကွင်းသည်အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းသို့၎င်းတို့၏အကျိုးဆောင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်လေလံဆွဲသည့်ရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးသည်သင့်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့်သင့်လျော်သောအသေးစားသို့မဟုတ် micro Forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ ပြနာကသင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရွေးချယ်မှုများစွာရှိခြင်းသည်မှန်ကန်သောပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ ပင်ခက်ခဲစေနိုင်သည်။
၎င်းကိုစိတ်ထဲတွင်ထားခြင်းဖြင့်၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော mini သို့မဟုတ် micro forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်သောအခါတွင် အရေးကြီးဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစာရင်းကို ပြုစုထားပါသည်။
သင်၏ အကာအကွယ်အတွက် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း ရှိပြီး Forex ပွဲစားကို ရှာဖွေရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တရားဝင် UK ပွဲစားများအားလုံးသည် ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်ဖြင့် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ FCA.
အဆိုပါ FCA လိမ်လည်သောပွဲစားများထံမှ သင်၏ခက်ခက်ခဲခဲရငွေများကို ထိန်းညှိခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ Forex ပွဲစားများသည် ရိုးသားမှု၊ ပွင့်လင်းမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများကို တရားမျှတစွာ စီမံခန့်ခွဲကြောင်း သေချာစေသည်။
ပွဲစားကို FCA ကဲ့သို့သော အဓိက ထိန်းကျောင်းမှုဖြင့် ကွပ်ကဲသောအခါ၊ ASIC (သြစတေးလျ) သို့မဟုတ် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) – ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ရန်ပုံငွေများကို လေးစားကြောင်း သေချာစေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင်သည် ကုန်သည်လျော်ကြေးအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သင်၏ရန်ပုံငွေများကို ခွဲခြားပြီး ကာကွယ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသိုက်နှင့်ငွေထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ပွဲစားကိုမဆိုလက်မှတ်ထိုးသည့်အခါပထမဆုံး port ခေါ်ဆိုမှုသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အသစ်ကိုရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။
mini နှင့် micro forex ပွဲစားအများစုသည် ကုန်သည်များကို သမားရိုးကျဘဏ်ငွေလွှဲမှုမှတစ်ဆင့် ငွေအပ်ရန်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် လူတိုင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။ တကယ်တော့၊ ဤအပ်ငွေနည်းလမ်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ရက်အနည်းငယ် ကြာနိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ သင်သည်ချက်ချင်းကုန်သွယ်ရန်မျှော်လင့်နေပါက၊ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ ငွေကြို/အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့် Skrill၊ Neteller နှင့် PayPal တို့ကဲ့သို့သော ရွေးချယ်စရာများပါရှိသော အသေးစား/မိုက်ခရိုပွဲစားကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ပြန့်နှံ့မှု သည် စဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ် အရေးကြီးသော အရာ ဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် မည်သည့် Forex ငွေကြေးအတွဲ၏ အဝယ်နှင့်ရောင်းစျေးနှုန်းကြားမှ ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ အရေအတွက် pips ထိုစျေးနှုန်းများအကြားတွင် ပျံ့နှံ့မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပျံ့နှံ့ အချို့သောအကျိုးအမြတ်များရရန်သင်၏စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
GBP / USD ကိုပြန့်ပွားမှုက3pips ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအနည်းဆုံး pips ၃ ခုတက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ပြန့်ပွားခြင်းသည်မိုက်ခရို / အသေးစားပွဲစားအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေသောအခါထွက်ကြည့်ရှုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဤသည်မှာ ရှင်းလင်းရန် ပြန့်ပွားမှု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ micro / mini ပွဲစားတွင် EUR / USD ကိုရောင်းနေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဝယ်ဈေးကတော့ 1.2100 ပါ။
ရောင်းဈေးကတော့ 1.2106 ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုအတိုင်း, ပြန့်ပွားကို pips ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်, ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းတစ်ခုချင်းစီ၏နောက်ဆုံးဂဏန်းများကိုသင်သတိပြုရန်လိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်ခြားနားချက်သည် ၆ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ EUR / USD အပေါ်ပျံ့နှံ့မှုသည် pips ၆ နှင့်ညီသည်။
အခကြေးငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်လို့ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်အကြောင်းပြောသင့်တယ်။ ပွဲစားနှစ် ဦး နှင့်အတူတူမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီတွင်မတူညီသောအခကြေးငွေများရှိသည် (ရှိလျှင်) ။
အချို့ပွဲစားများသည်မည်သည့်ကော်မရှင်မှမရှိဘဲ Forex အတွဲများကိုရောင်းဝယ်သူများအားကုန်သည်များကိုခွင့်ပြုသော်လည်းအချို့သည်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီအတွက်ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ပေးသည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Forex ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောနှုန်းထားကိုသင်ပေးရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ပွဲစားသည်ကြိုတင်ငွေရောင်းဝယ်ရေးကော်မရှင်တွင် ၀.၄% ကောက်ခံပါကသင်သည်ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ တန် ၀ ယ်ပါကကော်မရှင်တွင်ယူရို ၈ ကိုပေးချေလိမ့်မည်။
ခင်ဗျားပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာယူရို ၂,၄၀၀ နဲ့ကုန်သွားတယ်။ ဒါကကော်မရှင်သည်ယူရို ၉.၆၀ ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောအသေးစား / အသေးစား Forex ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များအားလုံးဝငွေမတောင်းပါ။
အကယ်၍ သင်သည် EUR/USD နှင့် GBP/USD ကဲ့သို့သော forex အတွဲနှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုကိုသာ အာရုံစိုက်လိုသော ကုန်သည်မျိုးဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် သင့်အတွက် သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ပိုမိုကွဲပြားခြားနား Forex အစုစုကိုပိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကွဲပြားခြားနားသောဘဏ္tradeာရေးပိုင်ဆိုင်မှုအများအပြားကုန်သွယ်လိုလျှင် - ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အမျိုးမျိုးအရေးကြီးပါသည်။ အချို့ပွဲစားများသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုရှိသည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် သင့်လျော်သော micro/mini forex ပွဲစားကို ရှာဖွေနေသောအခါ၊ exotics၊ minors နှင့် majors များအပါအဝင် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုပါရှိသော တစ်ခုကို ရှာဖွေသင့်သည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံးကို ပွဲစားပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝမကျူးလွန်မီ သိထားရန် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရရှိနိုင်ကုန်သွယ် Tools များ
မည်သည့် Forex ကုန်သည်မဆိုနောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္newsာရေးသတင်းများနှင့်အညီနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန်အရေးကြီးကြောင်းသိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမတည်ငြိမ်သောနေရာများတွင် Forex စျေးကွက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
အထူးသဖြင့်၊ ဤဥပမာသည် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ထွက်ခွာရန် အများစုမဲပေးမှုကို ဖြစ်စေသည့် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Brexit မဲပေးမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် GBP ၏တန်ဖိုးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
အခြေခံကျသောသတင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပြင်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အချက်အလက်များကိုလေ့လာခြင်းသည်အောင်မြင်မှုရရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သငျသညျ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ Forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကောင်းတစ်ခုရှိခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုမကြာခဏလျစ်လျူရှုထားသည်။ ပြီးနောက်သင်၏ micro သို့မဟုတ် mini forex အကောင့်တွင်သင်အကူအညီလိုအပ်နေသည့်အချိန်ရှိနိုင်သည်။
၎င်းကိုစိတ်ထဲတွင်၊ သင်သည်ဖောက်သည်များအားဆက်သွယ်ရန်ချန်နယ်များစွာကိုပေးဆောင်သောပွဲစားကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ အသုံးအများဆုံး အဆက်အသွယ်ပုံစံများမှာ တယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံနှင့် တိုက်ရိုက်ချတ်များဖြစ်သည်။
သင်၏ Forex ပွဲစားသည် ၂၄/၇ ၀ န်ဆောင်မှုရှိလျှင် - ၎င်းသည်သဘာ ၀ ကိုထင်ဟပ်စေသည် Forex ဈေးကွက်ဒါ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။
Forex ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်မည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်နည်း
အကယ်၍ သင်သည်အသေးစားနှင့်အသေးစားအကောင့်များဖွင့်ထားသော forex ပွဲစားတစ် ဦး ကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင်သင်စတင်မကုန်မှီသင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် အကောင့်ဖွင့်ခြင်းအဆင့်သို့ မရောက်သေးပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ 'Mini & Micro Accounts 2022 နှင့် အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများ' သို့ ကျော်သွားပါ။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောသူအချို့ကို စာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ သင်အလိုရှိသောအကောင့်အမျိုးအစားကိုကမ်းလှမ်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex ပွဲစားများ။
မဟုတ်ပါက သင့်ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၊ Forex ပွဲစားသို့ အကောင့်ဖွင့်နည်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်4လမ်းညွှန်ကို အောက်တွင် ရှာဖွေပါ။
သင့်တော်တဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကစင်မြင့်ကိုသွားပြီး 'sign up' လုပ်ပါ။ စတင်ရန်အခြေခံကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ပေးရမည်။ Forex ပွဲစားငွေစာရင်းအများစုအတွက်စာရင်းသွင်းသည့်အခါဤသည်မှာပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ကနဦးတွင် သင့်အမည်အပြည့်အစုံ၊ နေထိုင်ရန်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်နှင့် အခွန်အခြေအနေတို့ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းနောက်တွင်၊ သင်သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အချို့ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ တဖန်၊ ဤအချက်အလက်ကို ပေးဆောင်ခြင်းသည် စံအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းတွင်သင်မည်မျှ ၀ င်ငွေ၊ သင်၏အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့်အသားတင်တန်ဖိုးခန့်မှန်းချက်တို့ပါဝင်သည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံးသည်ပွဲစားသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်သောကုန်ပစ္စည်းကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 2: ကြိုတင်ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံ
သင်၏ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေသာမကပွဲစားများကသင့်တွင်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိပါက (ရှိခဲ့လျှင်) သိရန်လိုအပ်သည်။ Forex trading သည်ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပွဲစားများသည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုသည်။
အဆင့် ၃။ သင့်ဖောက်သည်အားသိရှိပါ
KYC ဟုလည်းလူသိများသောဤအချက်သည်ကုန်သည်များသည်ပွဲစားကို၎င်းတို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပွဲစားအများစုတွင်အလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူပွားခြင်းပါဝင်သည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်လည်းအသုံးစရိတ်ဥပဒေကြမ်းသို့မဟုတ်ဘဏ်ရှင်းတမ်းကိုလိုအပ်သည်။
အဆင့် ၄။ သင်၏ Forex အကောင့်ထဲသို့အပ်ငွေများ
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းမတူညီသောပွဲစားများသည်မတူညီသောအပ်ငွေအမျိုးအစားများကိုပေးသည်။ အချို့သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်ရန်ကြာနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မည်သို့အပ်နှံရမည်ကိုရွေးချယ်သောအခါယင်းကိုသတိရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex ပွဲစားများကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစာရင်းနှင့်အသေးစားငွေစာရင်း Forex ပွဲစားများစာရင်းကိုမည်သို့စုဆောင်းထားသနည်း။
လိုင်စင်ရနှင့်စည်းမျဉ်းများ - ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင့်-တစ်အဖွဲ့မှ ထိန်းမထားသော ပွဲစားကို ဘယ်သောအခါမှ အကြံပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကဲ့သို့ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူလည်း ပါဝင်သင့်သည်။ FCA, ASICဒါမှမဟုတ် CySEC.
ကော်မရှင်အနိမ့် သုည သို့မဟုတ် နိမ့်ကျသော ကော်မရှင် Forex ပွဲစားများသည် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်သည်။
နည်းပညာညွှန်းကိန်းများရွေးချယ်ခြင်း - သင်ရရှိနိုင်သောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများများများလေ၊ သင်လေ့လာလေလေဖြစ်သည်။
ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ရန်နည်းလမ်းများ - ပိုပျော်လေလေ။
တင်းကျပ်စွာပျံ့နှံ့ - တတ်နိုင်သမျှ ပိုက်ဆံရှာစေချင်တယ်။
Forex စုံလင်ခြင်း - ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်နိုင်သောငွေကြေးအတွဲများထားရှိခြင်းသည်ကုန်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အစုစုကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်
အသုံးပြုရလွယ်သောအရောင်းအ ၀ ယ်ဝက်ဘ်ဆိုက် - လွယ်လွယ်ကူကူသွားနိုင်သောရှင်းလင်းပြီးတိကျသောပလက်ဖောင်းသည်ကုန်သည်များအတွက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်
၀ ယ်ယူသူများကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း - ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကောင်းသည် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ ပြေလည်သွားမယ်ဆိုတာ သင်မသိနိုင်ပါဘူး။
ထို့ကြောင့်အသေးစားနှင့်အသေးစား Forex trading အကောင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သမျှအရာအားလုံးကိုသိပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ရန်သင့်တော်သောပွဲစားကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
အွန်လိုင်း forex ပွဲစားနေရာများတွင် ရွေးချယ်ရန် ရာနှင့်ချီရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် သင့်အား ခြေထောက်အလုပ်အချို့ကို သက်သာစေရန် 2022 ၏ အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားအချို့ကို စုစည်းထားပါသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုများကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိ Forex ပွဲစားများသည်အသေးစားသို့မဟုတ်အသေးစား Forex အကောင့်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သီးသန့်ဖော်ပြပေးခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်သူတို့သည်သင့်အားမယုံနိုင်လောက်အောင်နည်းသောအစုရှယ်ယာများနှင့်ကုန်သွယ်ရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်နာမည် (micro) နှင့်အသေးစားအကောင့်များသာဖြစ်သည်။
လောလောဆယ်တွင်၊ AVATrade ပလပ်ဖောင်းသည် ဖောက်သည်များအား Forex အကောင့်များတွင် $20 အထိ 10,000% ဘောနပ်စ်ကို ပေးဆောင်နေသည်။ အမြင့်ဆုံးဆုကြေးငွေကိုရရန်၊ သင်သည် သင့်အကောင့်ကို $50,000 ဖြင့် ရန်ပုံငွေပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် မိုက်ခရိုပမာဏများနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လိုပါက AVATrade တွင် အနိမ့်ဆုံးအပ်ငွေမှာ $100 သာဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ သင်၏ AVATrade အကောင့်အား ဘောနပ်စ်များ သင့်အကောင့်ထဲသို့ မဝင်မီ အတည်ပြုရပါမည်။
Capital.com သည် မည်သည့်ကော်မရှင်များကိုမျှ အခကြေးငွေမယူဘဲ အမှန်တကယ်တင်းကျပ်သော ပျံ့နှံ့မှုများရှိသည်။ ပွဲစားသည် ESMA လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လွှမ်းမိုးမှုကို ပေးသည်။ ပွဲစားသည် FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB တို့မှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အရေးအသားရေးသားသည့်အချိန်တွင်သြဇာသက်ရောက်မှုသည်ထူးခြားချက်နှင့်အသေးအဖွဲကိစ္စများ ၁:၂၀ နှင့်အဓိကအားဖြင့် ၁း၃၀ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပပြင်ပတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ အမှုဆောင်အရာရှိတစ် ဦး ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုမြင့်မားသောကန့်သတ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ Capital.com သို့ရန်ပုံငွေများသွင်းခြင်းရိုးရှင်းပါသည်။ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်သင်သည်ငွေသွင်းခြင်းအားဖြင့် $ 1 / £အထိနိမ့်ကျသည်။ သင်ပလက်ဖောင်းသည် e-wallets၊ credit / debit card နှင့် wire bank transfer ကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုပုံစံအားလုံးကိုလက်ခံသည်။
Forex ကုန်သွယ်မှုတွင် 'အများကြီး' သည် ကုန်သည်များနှင့် ပွဲစားများကြားတွင် universal forex trading language ကိုဖန်တီးရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Forex စျေးကွက်တွင် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာတွင် စတင်သူဖြစ်ပါက၊ ထို့နောက် mini သို့မဟုတ် micro forex အကောင့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အန္တရာယ်အချက်ကို သိသာထင်ရှားစွာ လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုရှိသည့် Forex ကုန်သည်များအတွက်အသေးစားသို့မဟုတ် micro lot သည် Forex အစုစုကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရည်အချင်းအများဆုံးဈေးကွက်တွင် သင်မည်မျှ အတွေ့အကြုံရှိပါစေ၊ ဤအကောင့်များသည် သင့်အား အရင်းအနှီးအနည်းငယ်မျှသာလိုအပ်သော ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံပိုမိုရရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကဲ့သို့ပင်၊ အာမခံချက်အနည်းငယ်မှမရှိသောအန္တရာယ်အမြဲရှိလိမ့်မည် - ထို့ကြောင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုမမှားပါနှင့် ကြီးမားသော အမြတ်အစွန်း။
micro forex အကောင့်နှင့် mini forex အကောင့်တစ်ခုအကြားခြားနားချက်ရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ နှစ် ဦး စလုံးသေးငယ်တဲ့အရောင်းအခွင့်ပြုနေစဉ်အကောင့်နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Micro lot သည်ယူနစ် ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၁ မိုက်ကရိုတုတ်သည်ပိုက်တစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၀.၁၀ ဖြစ်သည် အနိမ့်ဆုံးစာရေးတံမှာယူနစ် ၁၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အသေးစားနှင့်အသေးစား Forex အကောင့်များသည်အစပြုသူများအတွက်ကောင်းသောလား။
ဟုတ်တယ်။ အနိမ့်အမြင့်နှင့်အသေးစားအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်အသေးစားနှင့်အသေးစား Forex အကောင့်များကိုအတွေ့အကြုံမရှိသော Forex ကုန်သည်များအတွက်ကောင်းမွန်စေသည်။
ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော ပွဲစားပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့သော်လည်း မိုက်ခရိုအကောင့်အကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ၊ ဤပွဲစားကို ကျွန်ုပ် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Forex ပွဲစားအများစုသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို micro နှင့် mini forex အကောင့်များဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သော်လည်း အချို့က ၎င်းကို အတိအကျ မကြော်ငြာကြပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့က သင်၏ စံအကောင့်ပမာဏကို 0,1 pips သို့ လျှော့ချပါမည်။ အလွန်နည်းသော အနည်းဆုံး အပ်ငွေများကို ပေးဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများလည်း ရှိသေးသည်။
ထိန်းညှိအဖွဲ့ FCA မှ ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်ရယူရန် UK ရှိ မည်သည့်အရစ်ကျမဆို လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းကို ဖောက်သည်များ မြင်တွေ့နိုင်ရန် တရားဝင် ပလပ်ဖောင်းများတွင် ဂုဏ်ယူစွာ ပြသပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် UK မှမဟုတ်ပါက၊ အခြားသော ထိပ်တန်းအဆင့်ထိန်းညှိသူများတွင် ASIC (Australia) နှင့် CySEC (Cyprus) တို့ ပါဝင်သည်။